Nhau - Foregene Covid-19 Nucleic Acid Detection Kit yakapasa EU CE uye Singapore HSA certification
Pakutanga kwehosha, Foregene akanyatsoteerera, uye akaronga tsvagiridzo yesainzi nekukurumidza kuisa mari muR & D yemakona matsva ekuona coronavirus nucleic acid. Zvinoenderana nemakore ekuunganidza kwehunyanzvi hwekunaya uye ruzivo, timu yakashandisa Direct PCR patent tekinoroji kukurumidza kugadzira coronavirus nyowani (SARS-CoV-2) yekuona kit.
Iyi kititi haidi kutora nucleic acid kubva muyenzaniso, uye inogona kuita chaiyo-nguva fluorescent yakawandisa PCR kuona mushure meyakareruka nucleic acid kuburitswa kwekugadzirisa, kunorerutsa muyedzo unonetesa pre-kugadzirisa maitiro, inodzivirira kurasikirwa kweiyo nucleic acid yemuenzaniso, uye inowana mhedzisiro yekuedzwa mukati meawa imwe, kunyanya inokodzera zvidimbu zvakakura zvekuyedza nekukurumidza.
Nekupararira kwepasi rose kwedenda, senhengo yemakambani eChina eIVD, Foregene zvakare anoisa basa rakakosha repasi rose rekurwisa denda. Iyo kit yakawana EU CE chitupa mukupera kwaKurume. Pakati paApril, Foregene pamwechete neBIOWALKER PTE LTD, Singapore, vakapasa iyo Health Sciences Authority (HSA) yekuSingapore (Health Sciences Authority, HSA) kunyoreswa, zvinorevawo kutiForegene inogona kupa rubatsiro kune dzimwe nyika dzekunze dzinoda zvekudzivirira hutachiona.
Mune ramangwana, Foregene inotsigira akaomarara masayendisiti mafungiro uye icharamba ichipa zvigadzirwa nemasevhisi nehupamhi hwekuita uye hwakavimbika mhando kune maviri makuru misika yekutsvaga kwesainzi uye kuongororwa.
Post nguva: Mar-18-2020